IMEX Amerika faly fa manamaivana ny fameperana ny dia isika
Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » IMEX Amerika faly fa manamaivana ny fameperana ny dia isika
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fanabeazana • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
"Faly izahay fa manadio ny fameperana fitsangantsanganana manerana an'izao tontolo izao mankany Etazonia ny Etazonia manomboka ny 8 Novambra. Izany dia manome jiro maitso ho an'ireo mpividy, fampirantiana ary matihanina amin'ny indostrialy an-jatony maro hafa hankany Las Vegas ho an'ny IMEX America izay misokatra hatramin'ny Alakamisy 11 Novambra. Faly izahay amin'ny vaovao. ”
Ny sehatra IMEX America dia hanomboka an'i Etazonia sy ny fandraharahana manerantany, ara-potoana tanteraka hanaovana ny 9-11 Novambra.
Io fanapahan-kevitra io dia mampitombo ny tanjaky ny toekarena amerikana sy ny dia iraisam-pirenena amin'ny ankapobeny.
IMEX sy Mandalay Bay dia hanolotra fampisehoana izay mahafeno ny fepetra farany ilaina amin'ny fahasalamana sy fiarovana izay mahazo aina.
“Fantatsika fa misy ny fangatahana goavambe eo amin'ireo matihanina amin'ny hetsika mba hifandray indray ary hampiasa ny IMEX America ho toy ny sehatra hanombohana an'i Etazonia sy ny orinasa manerantany ary handamina mialoha ny 2022.
“Ity fanapahan-kevitra ity dia famporisihana ara-moraly goavana ho an'ny indostria. Ny tena zava-dehibe dia ny fampitomboana ny tanjaky ny toekarena amerikana sy ny tsenan'ny asa ary ho an'ny sehatry ny fitsangatsanganana iraisampirenena amin'ny ankapobeny.
Ray Bloom sy Carina Bauer, vondrona IMEX
“Manantena izahay ny hanome ny fiaraha-mientan'ny hetsika manerantany ny fodiana sahaza azy ary, satria andiany faha-10 an'ny IMEX America, dia namboarina ho fihaonana manokana tokoa. Ny hany azontsika holazaina dia…… amin'ny 8 Novambra! ”
Ny IMEX America dia atao ny 9-11 Novambra ao Mandalay Bay any Las Vegas miaraka amin'ny Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, amin'ny 8 Novambra. Raha hisoratra anarana - maimaimpoana, kitiho Eto. Raha mila tsipiriany misimisy momba ny safidin'ny trano hipetrahana sy ny famandrihana dia kitiho Eto.